IPFire: yakanaka yemahara Firewall yekuchengetedza iwe yakadzivirirwa | Linux Vakapindwa muropa
IPFire haisi yakajairwa firewall, semamwe mashandisiro erudzi urwu atakashandiswa. Mune ino kesi, iko kugoverwa kweLinux kwakapihwa kuchinangwa ichi, kuchikubvumidza iwe kuti uiise pakombuta yakachipa kuti uishandise kuita firewall yakanaka kuchengetedza imba yako kana kambani yako nenzira yakachipa uye yakapusa. Parizvino, sekunyora uku, yazvino vhezheni inowanikwa yeIPFire ndeye 2.19 (Core Gadziridza 106). Kana iwe uchida kuona rumwe ruzivo kana zvinyorwa pamusoro peiyo distro kana kurodha yazvino vhezheni iripo, unogona kuwana iyo webhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Mune ino yazvino vhezheni yakagadzika yeanoshanda system pane zvimwe zvitsva zvinhu senge nyowani Unbound Yakatumidzwa Proxy DNS, Dnsmasq DNS forwarder uye DHCP server yakashandiswa mune dzakapfuura shanduro dzeIPFire dzakatsiviwa. Sarudzo yevagadziri yagadzira DNSSEC kuitiswa uye inogoneswa nekukasira mu distro senge yazvino vhezheni, kuwedzera kune zvakakosha kugadzirisa, kugadzirisa mashandiro, mashandiro matsva uye kumwe kugadzirisa kwekuchengetedza. Izvi ndizvo zvakaratidzwa naMichael Tremer.
Sezvaunogona kufungidzira, iyo yasara ye mapakeji akagadziridzwa zvakare kushanduro nyowani, kusanganisira kernel yako. Yakagadziridzwa mapakeji anosanganisira OpenSSL, StrongSwan, GNU Gadzira, Smartmontools, squid, iproute, GNU nano, Midnight Commander, Transmission, Monit, Asterisk, GNU Diffutils, Attr, DejaGnu, Expat, Flex, Gettext, Krb, Guardian, pamwe nemamwe maraibhurari. inosanganisirwa, nezvimwe. Kukwakuka kwemhando yepamusoro kuti urambe uchichengetedza kuchengetedzeka, kana kuti zvirinani kuvandudza izvo, zvinova ndizvo zvinoitirwa iyi distro.
Ichi hachisi chinhu chitsva, isu tato taura mune ino blog nezve mamwe mapurojekiti akafanana senge IPCop, Endian Firewall, fli4l, m0n0wall, OpenWall, pfSense, nezvimwe, zvimwe zvacho zvichibva paLinux kernel uye nezvimwe zvichibva pane mamwe masisitimu akaita seFreBSD. Iwe unotoziva kuti hapana 100% yakachengeteka system, asi isu tinogona kuzviita chimwe chinhu kuchengetedzeka nerubatsiro rwemhando idzi dzemapurojekiti uye zvimwe zvirongwa. Iko kukanganisa kukuru kunoitwa nemushandisi kufunga kuti system yavo yakachengeteka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » IPFire: yakanaka yemahara Firewall kuti urambe wakadzivirirwa